Pp corrugated mpempe akwụkwọ ntụgharị igbe na plastic etiti makwaara dị ka Framework p corrugated ntụgharị igbe, p corrugated stakes ntụgharị igbe na plastic stakes p igbe ntụgharị igbe, ọ bụ otu ihe ahụ mepụta dị ka pp corrugated ntụgharị igbe, dị ka arọ ibu ikike, anyị na-ịgbakwunye plastic etiti ka igbe ahụ sie ike ma sie ike, ọ nwere ike ime ka ikike igbe ahụ dịkwuo ukwuu, ọ nwere nnukwu ihe na-eme ka okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ, nguzogide ịka nká, nnukwu ikike ike, gbatịa, mkpakọ, akwa, akwa okpomọkụ, agba ọgaranya, mbugharị igbe. Enwere ike iji igbe maka ntụgharị ma mechie nkwakọ ngwaahịa ngwaahịa, ọkụ, na-adịgide adịgide, na-akwagide.
Eyi corrugated mpempe akwụkwọ maka n'ala protec na-ewu na-echebe nwere ike ahaziri size na na-apụta, ejikari na ọkpụrụkpụ bụ 2-7mm oké, dị ka ndị dị iche iche arịrịọ, ọ ga-mere àjà ihe ọ -ụ -ụ-violet nchedo, mgbochi static, conductive, ire ọkụ retardant, omenala agba, corrosive inhibitors mere pụrụ iche p oghere mpempe akwụkwọ.
The pp corrugated ESD ntụgharị igbe bụ otu ihe ahụ dị ka pp corrugated ntụgharị igbe, o nwekwara Non-egbu egbu, keenweghiuto, mmiri-àmà, corrosion eguzogide, ìhè arọ, inogide, stackable, ọmarịcha anya, ọgaranya na agba, dị ọcha, recyclable, gburugburu ebe obibi-echebe , ọ dịghị mmetọ na àgwà ndị ọzọ.
ESD eyi oghere mpempe akwụkwọ nwere ìhè arọ, ike, edo ọkpụrụkpụ, ezigbo elu, ezi okpomọkụ na-eguzogide, elu n'ibu ike, magburu onwe chemical kwụsie ike na eletriki mkpuchi, na-abụghị ndị na-egbu egbu àgwà.
Pp oghere mpempe akwụkwọ bụ polypropylene (eyi) dị ka isi akụrụngwa mgbe extrusion ịkpụzi plastic mpempe akwụkwọ, n'ihi recyclability nke akụrụngwa na mmepụta, na efu emission nke mmepụta usoro na-eme ka ọ a ọhụrụ gburugburu ebe obibi-echebe ihe nke a ghọtara n'ụwa nile, na enwere ike iji ya rụọ osisi, kaadiboodu na efere igwe n'ọtụtụ ebe Ntinye ihe.
P corrugated mpempe akwụkwọ na ọtụtụ-eji silk spins mbukota, storages, mbupu, nkwakọba. The p corrugated mpempe akwụkwọ maka silk spins na-ahaziri mere, ọ bụ a oyi akwa na mpe mpe akwa maka silkspins iche iche na-echebe.
A na-eji pp corrugated mpempe akwụkwọ n'ọtụtụ ebe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, mpempe akwụkwọ oyi akwa dị iche iche pp oghere mpempe akwụkwọ maka ngwaahịa dị iche iche maka igbe mbukota, pallets na ndị ọzọ. Ihe nkpuchi akwa ahụ bụ mpempe akwụkwọ dị iche iche dị iche iche, ngwugwu dị iche iche na-emepụta nha ahaziri iche na ọdịdị maka iche na ichebe ngwaahịa na mbukota na mbupu. A na-eji ya eme ihe na nkwakọ ngwaahịa na mbupu, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ngwaahịa dị iche iche, mkpọchi mkpọ, ụgbọ mmiri na-ebugharị na ndị ọzọ.
Pp corrugated karama oyi akwa na mpe mpe akwa bụ pp oghere mpempe akwụkwọ dị iche iche arịrịọ mere dị iche iche size, ibu ibu, GSM na udi maka karama storages na mbupu, ọ dị mma maka karama ngwaahịa iche iche maka ọtụtụ n'ígwé na pallets, ọ bụ ihe kacha mma oyi akwa pad maka ichebe karama na mbukota na mbupu. A na-ejikarị ya eme ebe a na-eme biya, biya, mmanya, ụlọ ọrụ karama, ngwaahịa nri, ngwaahịa mkpọ na ndị ọzọ karama mkpọ, mbupu, ebe nchekwa, ụlọ nkwakọba ihe, mbubata, mbupụ maka iche iche ngwaahịa.
Eyi oghere osisi bụ ọhụrụ ụdị nke gburugburu ebe obibi-echebe nkwakọ ihe onwunwe, na usoro nke iji agaghị emepụta ájá, na ogologo ọrụ ndụ, bụ karịa 4-10 ugboro ndụ nke corrugated board, recyclable, ji nwayọọ nwayọọ dochie na-emekarị nke akwụkwọ corrugated board, tumadi na-egosipụta na ngwaahịa nkwakọ.
Eyi corrugated mpempe akwụkwọ ntụgharị igbe na-mere site p corrugated mpempe akwụkwọ, na p corrugated mpempe akwụkwọ mgbanwe diecut site dị iche iche size igbe, dị iche iche udi nkwakọ igbe. pp corrugated ntụgharị igbe bụ ọhụrụ ụdị nke gburugburu ebe obibi-echebe nkwakọ ihe onwunwe, nke na ọtụtụ-eji na ntụgharị loading, nkwakọ, nchekwa na njem nke na kọmputa ngwaọrụ na ngwaahịa na mmepụta usoro.